Dr. Qays Saciid oo ah Barafasoor sharci yaqaan ah ayaa loo doortay Madaxweynaha Tuniisiya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dr. Qays Saciid oo ah Barafasoor sharci yaqaan ah ayaa loo doortay...
Dr. Qays Saciid oo ah Barafasoor sharci yaqaan ah ayaa loo doortay Madaxweynaha Tuniisiya
Dr. Qays Saciid oo ah barafasoor sharci yaqaan ah, oo ka tirsanaa jaamacadda Tunis ayaa loo doortay madaxweynaha Tuniisiya. Waxa uu ahaa tartame aan xisbina ka tirsanayn (independent). Waligiis siyaasadda dalkiisa kama soo muuqan.
Kaligii ayaa tartamayay oo kharashka uu ololaha ku galay badankiis shacabkiisa taageersan ayuu ka helay. Dawlado shisheeya ma kharash garaynayn sida tartamayaaasha kale. Waxa uu ku guulaystay codod 72% gaaraya. Shacabka Tuniisiya ayaa ugu codeeyay codadka intaas le’eg. Isaga oo aan siyaasadda khibrad u lahayn. Kaliya waxa ay ku doorteen inuu musuqa aad u neceb yahay oo uu la dagaalo, waqtigiisa badankiisna uu ku baxshay daraasaynta sharciga iyo waxbaridda dadkiisa.
Tuniisiya waa dalka ugu dimuquraadisan wadamada Carbeed, ahna kan ugu dimuquraadisan Afrika. Awoodda ugu sarraysa waxa ay gacanta ugu jirta shacabka. Waa dad ka duwan nidaam ahaan wadamada Carbeed. Waa dal dadkiisu ay kudayasho mudan yihiin. Faransiiska iyo wadamada khaliijka wax loo shegay in reer Tuunis kay doonayaan uu dalka hogaaminayo oo kaliya.